Noocyada naqshadaha garaafyada | Hal-abuurka khadka tooska ah
Noocyada naqshadaha garaafyada
Naqshadaynta garaafyada gudaheeda waxaa jira qaybo badan oo kala duwan oo leh hal shay oo ay wadaagaan laakiin diiradda saaraya adeegsiyaal kala duwan. Ka hadlida dhammaan noocyada naqshadaha garaafyada waxay noqon kartaa mid adag, laakiin waxaan ka hadli karnaa kuwa ugu muhiimsan.
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan kuwa jira iyo kuwa ugu muhiimsan, markaa halkan waxaad ka heli doontaa jawaabta su'aashaas aad haysatey.
1 Waa maxay naqshadeynta garaafyada
2 Immisa nooc oo naqshado garaafyo ah ayaa jira?
2.1 Naqshadaynta tifaftirka
2.2 naqshadeynta deegaanka
2.3 Naqshadaynta sawirada baakadaha
2.4 Naqshadaynta bogga shabakadda
2.5 Naqshadeynta xayeysiinta
2.6 naqshadeynta summadaha
2.7 Naqshad 3d
2.8 design mobile
3 Ma jiraan naqshado garaafyo badan?
Waa maxay naqshadeynta garaafyada
Haddii aan ka raadinno qeexitaanka saxda ah ee naqshadeynta garaafyada qaamuuska sida RAE, waxay noo sheegaysaa kuwa soo socda:
"Fikradda asalka ah ee shay ama shaqada loogu talagalay soo saarista taxane ah".
Runtii, qeexidani waa mid gaaban, mar haddii la og yahay in naqshadeynta garaafku ay tahay wax kasta oo noo ogolaanaya inaan xayeysiino oo aan xayeysiino adeeg, calaamad, badeecad, iwm. Si kale haddii loo dhigo, waa tan awood u leh gudbinta farriinta. Oo isagu hadal kuma sameeyo, laakiin wuxuu ku sameeyaa sanamyo; waa shay muuqaal ah oo doonaya inuu saameyn ku yeesho dadka kale.
Sababtan awgeed, naqshadeynta garaafku waxay si fiican u noqon kartaa tubbada subagga ee aad subaxdii isticmaashid ama mareegaha aad jeceshahay inaad eegto habeen kasta si aad u aragto inay soo saareen alaab cusub.
Immisa nooc oo naqshado garaafyo ah ayaa jira?
Qeexidda tirada saxda ah ee naqshadaha garaafyada ma fududa, sababtoo ah sida aad aragtay, waxay si ficil ah u joogtaa mar walba. Astaanta routerkaaga, bogga aad baadhayso, xayaysiiskaas adiga kugu saameeyay... Dhammaantood waxay la xidhiidhaan naqshadaynta.
Laakiin sababtaas awgeed naqshadeeyayaal badan ayaa ku takhasusay hal nooc ama ugu badnaan laba ama saddex, sababtoo ah maaha wax aan suurtagal ahayn in la daboolo dhammaantood.
Oo imisa ayaan la kulmi karnaa? Waxaan kuu dhaafnay liis qaar ka mid ah.
Waxa kale oo loo yaqaannaa naqshadaynta buug-gacmeedka, sida magaceedu horeba u tilmaamayo, waa kuwa ku takhasusay samaynta majaladaha, buug-gacmeedyada, hagayaasha, buug-gacmeedyada, iwm. Waxay leeyihiin aqoon ay ku doortaan wejiga saxda ah iyo in ay ururiyaan boggaga ku salaysan sawirka uu akhristuhu samayn karo.
Waxay ogyihiin waxa ay dadweynuhu u baahan yihiin inay dareemaan soo jiidasho, waana sababta ay u kala horraysiiyaan sawiro fiiqan, si xeeladaysan loo meeleeyay si ay u muujiyaan qoraallada ama inay soo jiitaan dareenka.
Marka laga hadlayo naqshadaynta tifaftirka "khatarta ah", waxaanu ka hadli doonaa mawduuc suugaaneed, taas oo ah, sida loo dhiso buug laga bilaabo daboolka ilaa bogagga gudaha, dhabarka dambe, lafdhabarta, iwm.
Waa naqshad noqday mid aad moodo, oo shaki la'aan noqon karta mid aad muhiim u ah mustaqbalka. Waxay mudnaan siinaysaa isku xidhka dadka qaab muuqaal ah oo leh dhinacyo la xidhiidha dabiiciga, deegaanka.
Ha ku jahawareerin ereyga deegaanka, maadaama aysan kaliya tixraacin dabeecadda iyo deegaanka, laakiin sidoo kale waxay tilmaamaysaa naqshadaha, farshaxanka, muuqaalka, iwm.
Si kale haddii loo dhigo, naqshadaynta buug-yaraha loogu talagalay beerta dabiiciga ah waxay la mid noqon kartaa midda guryaha lagu iibiyo.
Naqshadaynta sawirada baakadaha
Korodhka sii kordhaya sababtoo ah kobaca dukaamada onlineka Oo waa in shakhsiyeynta sanduuqyada alaabta lagu soo diro ay bilaabayaan inay noqdaan kuwo muhiim u ah iibiyeyaasha iyo iibsadayaasha. Sanduuqa la shakhsiyeeyay ayaa aad looga qaddariyo ka brown dhaqameed.
Waana taas, in kasta oo aad u malaynayso in dhamaadka labadu ay ku dambayn doonaan dib-u-warshadeynta (ama kiiska ugu xun ee qashinka), runtu waxay tahay in aad u isticmaali karto naqshadaynta garaafka ee baakadaha, oo aad ku guulaysato. , fursadaha badan ee sanduuqaasi ku dhamaanayo inuu sii joogo guriga iyo inuu xasuusiyo dukaanka ay tahay inay wax ka iibsadaan.
Naqshadaynta bogga shabakadda
Dhib malaha haddii ay tahay blog, shabakad shirkad, dukaan online ah ... Haddii ay tahay inaad mid abuurto oo aadan rabin inaad isticmaasho templates laakiin aad rabto in laga soo bilaabo xoqan, markaa waxaad u baahan tahay naqshadeeyaha garaafyada. ku takhasusay bogagga shabakadda.
Xirfadlahani wuxuu yeelan doonaa dhammaan aqoonta aad u baahan tahay si aad u sameyso naqshad soo jiidasho leh oo isku dheelitirta qaabka ugu fiican ee shaqeynta, si dadka isticmaala ay si sahlan u helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin.
Sababtan awgeed, waxaan caadi ahaan la shaqeynaa UX (khibrada isticmaale) naqshadeeyayaasha ama iyaga laftooda ayaa lagu tababaray.
Isagaa masuul ka ah boodhadhka, boodhadhka iyo dhammaan arrimaha xayaysiinta ee shirkadda, waana sababta ay intooda badani ugu shaqeeyaan wakaaladaha xayeysiiska.
Waxa uu ku takhasusay wax kasta oo ganacsi iyo suuq gayn, sababtoo ah waa in uu yaqaan sida loo iibiyo dadka isticmaala, si uu taas u sameeyo waa in uu dhisaa farshaxankiisa si aakhirka uu u yimaado muuqaal. Oo sidee buu u sameeyaa? Tababarka ka sokow, ogaanshaha sida loo maareeyo barnaamijyada naqshadeynta sida Illustrator, InDesign, Photoshop, maqal-muuqaal, barnaamijyo dhijitaal ah, iwm.
Mid kale oo bixiya inta ugu badan ee laga hadlo sannadihii u dambeeyay. Waxa kale oo laga yaabaa inaad u ogaato sida aqoonsiga shirkadeed, taas oo ah, abuurista "Nuxurka" calaamad ka faa'iideysanaya kaliya maaha buug-gacmeedka aqoonsiga shirkadda, kaas oo xarfaha loo isticmaalo, midabada, iwm. taas waa in la isticmaalo, laakiin sidoo kale sida loo sameeyo.
Dhab ahaantii, shirkadaha waaweyni way haystaan ​​oo waa dukumeenti ay adeegsadaan wakaalado badan iyo noocyo kale oo naqshado garaafyo ah (xayeysiis, baakad, iwm.).
Waxaan dhihi karnaa inaan wali ku cagaareyno naqshadeynta garaafyada noocan oo kale ah, laakiin tillaabooyin waaweyn ayaa lagu qaaday. Intaa waxaa dheer, hadda waxay haysataa fursado badan oo xirfadeed oo ah mid ka mid ah waxyaabaha cusub iyo sababtoo ah shirkado badan ayaa raadinaya iyaga.
Aqoonta ay tahay inay lahaadaan waxaa ka mid ah adeegsiga barnaamijyo gaar ah sida 3D Studio Max ama saamaynta kadib. Dabcan, hal-abuurka iyo saldhigga naqshadeynta garaafyada waa inaysan ka maqnaan.
Haddii aan horay uga soo hadalnay naqshadeynta shabakadda, hadda naqshadeynta mobilada ee bogagga shabakadda iyo codsiyada labadaba aad ayey muhiim u tahay, adeegsiga aan siino taleefannada, way ka sii badnaan doontaa.
Si tan loo sameeyo, kaliya maaha inaad khabiir ku tahay Photoshop iyo Illustrator, laakiin sidoo kale adduunka dhijitaalka ah iyo codsiyada.
Ma jiraan naqshado garaafyo badan?
Dabcan! Runtu waxa ay tahay hadii aan mid walba magacowno ma dhamayn lahayn. Laakiin haddii aad ku qanci weyday kuwii hore, halkan waxaan kuugu dayn liis koox kale oo iyaga ka mid ah. Iyo kuwo kale oo badan!
Naqshadaynta dhijitaalka ah.
Ma taqaanaa noocyo badan oo naqshado garaafyo ah? Wax ma noo sheegi kartaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Noocyada naqshadaha garaafyada
Qaababka xarfaha bilaashka ah
Qaababka bilaashka ah ee Prestashop